बलात्कार पछि जन्मिएका थिए जिसस ख्रिष्ट - Nepali Online News Media-shikharnews.com
बलात्कार पछि जन्मिएका थिए जिसस ख्रिष्ट
२०७६ असार १४ शनिवार
जेसस ख्रिष्टका पिता को हुन् ? यो प्रश्न अझै अनुत्तरित छ । यसबारे वैज्ञानिक अनुसन्धानहरु भएका छन् । उनी कुमारी आमाको सन्तान भएको मिथक छ । २२ डिसेम्बर सन् २००० मा जेसस क्रिष्ट कुमारी आमा मेरीबाट जन्मिएको मिथकलाई चुनौती दिदै बीबीसीले दी भर्जिन मेरी नामक वृत्तचित्र तयार गर्यो । तर, प्रसारण गर्नुपूर्व विवाद निस्कियो ।
क्याथोलिक चर्चले कडा आलोचना गरेको वृत्तचित्रले मेरी गरिब र शोषित युवती थिइन् भन्ने तथ्य पत्ता लगायो । जेसस तिनै युवतीको सन्तान थिए जो रोमन सैनिकबाट बलात्कारका कारण गर्भवती भएकी इिन् । विवाह पूर्व बलात्कारका कारण जन्मिएको अवैध बच्चा हुनसक्ने दाबी वृत्तचित्रले प्रस्तुत गर्यो । क्रिष्चियन धर्मालम्बीको कट्टरपन्थी समूहले वृत्तचित्रको चर्को विरोध र आपत्ती जनाए ।
वृत्तचित्र विवाद र बहसको विषय बन्यो । कुमारित्व भंग नभई गर्भ बस्न नसक्ने तर्कको आधारमा वृत्तचित्रले रोमन सैनिकको बलात्कारका अलावा अर्को सम्भावना बारे उल्लेख गर्यो । मेरीको गोप्य प्रेमसम्बन्ध वा विवाहको टुंगो लागेका पुरुष जोसेफसँगको विवाहपूर्वको यौनसम्बन्धका कारण जेससको जन्मबारे राय प्रस्तुत ग¥यो ।
मिथकलाई असत्य पुष्टि गर्दै मिथककै आधारमा तथ्य पत्ता लगाउने अनुसन्धानात्मक प्रयासहरू अझै भइरहेका छन् । जेसस को हुन् ? जेसस थिए कि थिएनन् ? जेससका बारे फैलाइएको मिथकको सत्यतथ्य के के हुनसक्छ ? प्रश्न उठाउँदै उत्तरको खोजविन रोकिएको छैन । जेससको जन्मलाई चर्चले मिथकमै सिमित राखेपनि अनुसन्धानकर्ताहरूले खोजमार्फत् चुनौती दिदै आएका छन् ।
उनको बाबुको यकिन नभएको र आमा मेरीलाई सम्मानित स्थानमा राखिएकाले पनि जेससको जन्म र बाल्यकालको संघर्षबारे विवादास्पद दाबीहरू आइरहन्छन् । जे जस्ता तर्कहरू गरिएपनि जेससले परम्परागत र रुढीवादी समाजको बेथितीविरुद्ध परिवर्तनको आवाज उठाए । रुढीवादी समाजमा सुधार ल्याउने पहल गरे । उनी शोषित, पीडित र कमजोरका पक्षमा थिए भन्ने तर्क बलियो छ ।
६ देखि ४ बी.सी.का बीच २५ डिसेम्बरका दिन उनको जन्म भएको अनुमान गरिएको छ । क्रिष्चियन धर्मालम्बीहरू क्रिष्टलाई इश्वरको पुत्र वा इश्वर नै ठान्छन् । ग्रीकहरू हेब्रु मसिहा भन्छन् । जलाई ईश्वर मानिन्छ । उनलाई जसले जे मानेपनि समाज परिवर्तनका अग्रदूत भने पक्कै हुन् । अहिले विश्वका क्रिश्चियन धर्मावलम्वीको संख्या सबैभन्दा धेरै छ ।